YEYINTNGE(CANADA): Thursday, May 27
27 May 2010 ဒိုင်ယာရီ
27 may 2010 yeyintnge Diary.pdf 1.757 MB
27 May 2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/27/20100အကြံပြုခြင်း
ရှင်သန်နေဦးမည့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့် ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲဆီသို့ ချီတက်ကြစို့
NEJ / ၂၇ မေ ၂၀၁၀
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအား ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းကာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးမည်ဟု ကတိပြုကြေညာကာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ လုံလောက်သည့် အချိန်ပေးကာ လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် အာဏာသိမ်းပြီး (၁) နှစ်နှင့် (၈) လကျော်အကြာ ၁၉၉၀ ပြည့် မေလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကို ဖြိုခွင်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက် (၅) ရက်အကြာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှနေ၍ တိုင်းပြည်သို့ ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း၌ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်က …
“ကျနော်တို့တတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တပ်မတော်သားများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံ့ကျေးဇူးသစ္စာကို ခံယူထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားများအပေါ် ၀န်ခံထားရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ကတိသစ္စာကို မည်သို့သောအကြောင်းကြောင့်နဲ့မျှ ပယ်ဖျက်၊ ဖောက်ဖျက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ထားရှိစေလိုပါတယ်”
“ကျနော်တို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူပြည်သားများက မိမိတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီပိုင်ခွင့်အရ လွတ်လပ် မျှတစွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အစိုးရတရပ်က ပေးအပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တာဝန်တွေကိုသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံကတိပေးလိုပါတယ်” … စသည်ဖြင့် ကတိပေးစကား ပြောကြားခဲ့ပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်က ထိုသို့ ကတိစကား ပြောကြားသကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကလည်း ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပြည်သူလူထုရှေ့မှ မားမားမတ်မတ် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည့်အကြောင်း ကတိစကားများ အထပ်ထပ်ပြောကြားခဲ့ကြပေသည်။
သို့နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အခါ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့် မဲဆန္ဒနယ် (၄၈၅) နယ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃၉၂) ဦး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရကာ ရာခိုင်နှုန်း (၈၀) ကျော်ဖြင့် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
သို့သော် အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုသည် စစ်သားပီပီ ကတိမတည်ဘဲ မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ငြင်းဆန်ရုံသာမက ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင် စစ်တန်းလျားသို့ပြန်မည်ဟု ပြည်သူသို့ ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည့် န၀တဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကိုပင် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားကာ (ယနေ့အချိန်တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားနေသည့်) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ရယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န၀တ) ကို နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) ဟု အမည်ပြောင်းကာ ယနေ့အထိတိုင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဦးဆောင်သည့် နအဖစစ်အုပ်စုသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကဲ့သို့ လက်ကိုင်တုတ်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းကာ ပြည်သူလူထုအပေါ် အနိုင်ကျင့်သည့် လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဒီပဲယင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုကြီးကို လက်ရဲဇက်ရဲကျူးလွန်ခြင်း၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးတော်ပုံကြီးကို လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ် နှိမ်နင်းခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပေါ် အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခြင်း၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း … စသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျိုးစုံနှင့် စစ်ရာဝတ်မှုအဖုံဖုံကို ကျူးလွန်ခဲ့ပေသည်။
အနှစ် (၂၀) ကျော်အတွင်း စစ်အုပ်စုက သူတို့၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲရေးအတွက် သူတို့လုပ်စရာရှိသည့်အလုပ်ကို မည်သူ့ကိုမှ မထောက်ထားမညှာတာဘဲ တစိုက်မတ်မတ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုသာ ကြေညာချက်အမျိုးမျိုးထုတ် တောင်းဆိုနေခဲ့သည်ကို တွေ့ရပေသည်။
သို့သော် နအဖစစ်အုပ်စုက မည်သို့မှ လိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲ သူတို့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားညီလာခံ၊ ထိုမှတဆင့် ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံကို တက်သုတ်ရိုက်ကျင်းပကာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပေဒကို ထုတ်ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်သူလူထု မျက်ရည်ဝေနေချိန် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလအတွင်းတွင် ၂၀၀၈ ညောင်နှစ်ပင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတင်းအဓမ္မ လိမ်လည်အတည်ပြုခဲ့လေသည်။
ယခုအခါတွင် နအဖစစ်အုပ်စုက (၉၀) ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို မျက်နှာပြောင်တိုက် လျစ်လျူရှုကာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဥပေဒများကို ထုတ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုနေပေသည်။ သို့သော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ကန့်ကွက်မဲမရှိ သပိတ်မှောက်လိုက်သဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုရန် ကြိုးစားနေသည့် နအဖစစ်အုပ်စုအတွက် အရှိုက်ထိသလို ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပါတီမှတ်ပုံမတင်သည့် တိုက်ပွဲဝင်မှုကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် ပြည်သူလူထုကလည်း တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် တိုက်ပွဲကို ထိုမျှနှင့် ရပ်တန့်မနေဘဲ ပြည်သူလူထု မဖျက်သရွေ့ ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိသည့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် အသက်ဝင် အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် မိမိနည်း မိမိဟန်ဖြင့် နအဖစစ်အုပ်စုကို စိန်ခေါ်တိုက်ပွဲဝင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း၊ ထိုသို့ စွန့်စားတိုက်ပွဲဝင်မှသာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက အပ်နှင်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့အာဏာသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် ပြည်သူလူထုထံ အမြန်ဆုံး ဆင်းသက်ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ အနှစ် (၂၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် ခေတ်ပြိုင်က အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ရပေသည်။
၃ ကြိမ်လွတ်ခဲ့ပြီးမှ ၂ ခါ စီရင်ချက် ချခံရသူ
ဘကောင်း Thursday, May 27, 2010
ကိုကျော်ကိုကိုသည် စစ်အစိုးရလက်မှ ၃ ကြိမ်တိတိ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုပမ်းနိုင်ခဲ့ သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင်တော့ ကံအကြောင်း မလှ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်မှုဖြင့် သူ့အား ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး တရားမ၀င် ဗီဒီယိုအခွေများ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
သူ၏ ထောင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရန် ၁ နှစ်အလို ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့၌ တရားမ၀င် အသင်း အပင်း ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပုန်ကန်မှု စသည့် စွဲချက်များဖြင့် စစ်အစိုးရက သူ့အား နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် သက်တမ်းတိုး ချမှတ် လိုက်သည်။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ရဟူး ကျော်ကျော်မောင် (ခေါ်) ကိုကျော်ကိုကိုသည် ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေ မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပြီး သူ၏ မိဘများမှာ ကျောင်းဆရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်းများက သူ့ကို နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်လာစေရန် စည်းရုံး ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က သူသည် စီးပွားရေး မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ အတွက် လေ့လာနေချိန် ဖြစ်သည်။
“သူ့မှာ တခြားသူတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ရှိပေမယ့်လည်း သူကိုယ်တိုင်က စာဖတ်အားကောင်း၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ စည်းကမ်းသေသပ်တဲ့ လူငယ်တဦးပါ” ဟု လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က ကိုကျော်ကိုကိုနှင့် တွေ့ခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတဦးက ပြောပြသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုကြီး၏ တခုသော နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား ကျင်းပသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်း တကျောင်းတွင် ထင်ရှားသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကိုကျော်ကိုကို ဆုံတွေ့ခွင့် ရခဲ့သည်။ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ ရုတ်တရက် တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသဖြင့် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် တခြား ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ပြန်အဖမ်းခံရသည့်အပြင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း အတော်များများလည်း မတရား ဖမ်းဆီးခံရမည့်အရေးမှ လွတ်မြောက်ရန် နိုင်ငံမှ တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုကျော်ကိုကိုက လစ်လပ်သွားသော ခေါင်းဆောင်မှုနေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတ၀န်း အစိုးရဆန့်ကျင်သော လူထုအုံကြွမှုနောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် လူငယ် မျိုးဆက်သစ်ကို ကိုယ်စားပြုသူ ကိုကျော်ကိုကိုက ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုအတွင်းက တဖန်ပြန်လည် အားကောင်းခဲ့သော ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ကို အားသစ်လောင်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သော ဗကသ သည် မည်သည့်အခါကမျှ မတရား အသင်းအဖြစ် ကြေညာခြင်း မခံခဲ့ရသော်ငြား ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ တရားမ၀င် အသင်းအပင်း တခုကဲ့သို့ ရပ်တည်ခဲ့ရသည်။
“သောကြာနေ့ တရားခွင်မှာတုန်းက ကျမအစ်ကိုက သူ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ပြန်လည်စုစည်းခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မငြင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ တရားသူကြီးတွေကို သူနောက်မဆုတ်တမ်း ပြောခဲ့ပါတယ်” ဟု ကိုကျော်ကိုကို၏ ညီမဖြစ်သူက ပြောပြခဲ့သည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားခဲ့သော အချိန်တွင် ကျော်ကိုကိုသည် သူ၏ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို ဆက်လက်သယ်ပိုးခဲ့သည်။ သံဃာတော်များ ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ကိုကျော်ကိုကိုသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း နှင့် အနီးတ၀ိုက်တွင် ပုန်းအောင်းနေခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကိုကျော်ကိုကို ခိုအောင်းနေသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အိမ်ကို အာဏာ ပိုင်များက ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ ၀ရန်တာမှ သူ ခုန်ချ လွတ်မြောက်သွားသော်လည်း သူ့ သူငယ်ချင်းတချို့ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
နောက်ပိုင်း၌ သူ့အား ခိုလှုံခွင့်ပေးထားသည့် ရန်ကုန် ဘုန်းကြီးကျောင်း တကျောင်းတွင် ရဲက သူ့ကို ရှာတွေ့သွား ခဲ့သည်။ သို့သော် သူလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်သည်။ တတိယအကြိမ်တွင်မူ အာဏာပိုင်များက သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားပြောနေစဉ် ရန်ကုန် Junction 8 ကုန်တိုက်အတွင်းရှိ မုန့်ဆိုင်တခု၌ သူ့အား ၀င်ဖမ်းခဲ့သည်။ ဤတကြိမ်တွင် လည်း သူလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး သူ၏သူငယ်ချင်းအားလုံး အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် ကိုကျာ်ကိုကို ပဲခူးသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရ၏ အခြေခံဥပဒေ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန္ဒမဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲ မကျင်းပခင် သူအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ကိုကျော်ကိုကို ပုန်းခိုနေသော နေရာမှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုအကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုအခွေများကို အာဏာပိုင်များက ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ မိသားစုဝင်များက ထိုအခွေများသည် သူနှင့် လုံးဝပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗီဒီယိုအက်ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ကိုကျော်ကိုကိုအား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ကျခံရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ဟာသပညာရှင် ဇာဂနာကို ကြီးလေးသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် စစ်အစိုးရက အသုံးပြုခဲ့သည့် စွဲချက်များအနက် ဗီဒီယို အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုလည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ဇာဂနာသည် ယခုလက်ရှိတွင် လူသူအလှမ်းဝေးသော အကျဉ်းထောင်တခု၌ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည်။
သောကြာနေ့ တရားရုံးကြားနာမှုအပြီးတွင် ကိုကျော်ကိုကိုသည် တရားမ၀င် အသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပုန်ကန်မှု များဖြင့် နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းကြားနာမှုအား စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်သည့် သတင်း ဌာနများတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ကိုကျော်ကိုကို၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးအောင်သိန်း၏ အဆိုအရ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ယင်းပြစ်မှုများကို သူ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူက ၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက ကျောင်းသားထုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ လူထုကို မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တာက တရားမ၀င်အသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုတဲ့ ပထမစွဲချက်နဲ့ သွားညိတယ်။ ဒုတိယ စွဲချက်ဖြစ်တဲ့ ပုန်ကုန်မှုဆိုတဲ့စွဲချက်ရဲ့ အခြေခံကလည်း အဲဒီကနေပဲ လာတာပါ” ဟု ဦးအောင်သိန်းက ပြောပြသည်။
“ကျနော်ထင်တာ ကတော့ ဘာမှရေရေရာရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ထောင်သက်တမ်းကို တိုးချင်လို့ လုပ်တာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ငါစိတ်မပျက်ပါဘူး။ ထောင်ထဲမှာ ငါ အသက်ရှင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်” ဟု လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ် ရန်ကုန် တရားရုံးထုတ်စဉ်က သူ၏ညီမဖြစ်သူကို ကိုကျော်ကိုကိုက ပြောခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း တခြား လူငယ်များလည်း ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချခံခဲ့ရသည်။ သာဓက အားဖြင့် ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်၊ ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ဇေယျာသော် စသည့်လူငယ်များသည် သူတို့၏ နောင်တော်များနှင့် အတူ နိုင်ငံအ၀န်းရှိ ထောင်များတွင် အကျဉ်းချခံနေရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်လူထုအုံကြွမှုနောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူငယ်များကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ သည့် ပထမဦးဆုံးနှစ်မဟုတ်ပေ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အစိုးရဆန့်ကျင်သူ လူငယ်များစွာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တချို့လူငယ်များသည် နှစ် ၅၀ အထက်ပင် ကျခံခဲ့ရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ အဆိုအရ အဖမ်းခံရသော လူငယ်များ အနက် အတော်များများသည် ထောင်များတွင် ဆက်လက် အကျဉ်းကျခံနေရဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
စစ်အစိုးရက နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော ရွေးကောက်ပွဲတခု ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေသော လတ်တလောအခြေအနေတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်သည် အကျဉ်းထောင်များတွင် အကျဉ်းကျ ခံနေကြရသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးသည် မဲပေးခြင်းမှ ကန့်သတ် ခံထားရပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခွင့်လည်း မရှိပေ။
“ကျမအစ်ကိုက ဒီနှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း သူလုံးဝ အယုံအကြည်မရှိပါဘူး” ဟု ကျော်ကိုကို၏ ညီမဖြစ်သူက ပြောပြသည်။
နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရဲဘော်များ။ ။
ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာဂျင်ဝပ်မ်အား ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
အမေရိကန်ဆီးနီးလွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာဂျင်ဝပ်မ်သည် မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အာရှနိုင်ငံများသို့ ခရီးထွက်ခွါသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဇွန်လ ၅နှင့် ၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနို်င်ငံစစ်အစိုးရနှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် စစ်အစိုးရနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးများ၊ ဒီမိုကရေစီအေ၇းအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက်များ ရှိမည်လား ဆိုသည်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် ရန်လိုအပ်လာပါသည်။ လွှတ်တော်အမတ်သည်ဂျင်ဝပ်မ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွါးရေးပ်ိတ်ဆို့ထားမူကို ဆန့်ကျင်သောသူတဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုသူ၏ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးအတွက် ဖြစ်ပေါ်စေမည့် သံခင်းတမန်ခင်းလမ်းကြောင်း မဟုတ်ကြောင်း သိသာနိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲသို့ အင်းယားကန်မှ ရေကူးဝင်ရောက်သူ မစ္စတာဂျွန်ယက်ထောကို အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ ရ နှစ်ကျခံစဉ် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူ ဖြစ်သောမစ္စတာဂျင်မ်ဝပ်မှာ စစ်အစိုးရနှင့် အဆင်ပြေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၀ါရှင်တန်မြို့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ခန်းမတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်အစိုးရမှ ကျင့်သုံးသော ပေါ်လီစီရေးရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ကြားနာပွဲတခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းကြားနာပွဲတွင် မစ္စတာကပ်ကမ်ဘဲလ်က မြန်မာစစ်အစိုးရအား စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားမူကို ဆက်လက်ထားသင့်ကြောင့် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါသည်။ အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူကို ကျင့်သုံးမည်ဆိုသော်လည်း စစ်အစိုးရအလိုကျ ဆက်ဆံသွားမည် မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်သူ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်း ( ကွယ်လွန်သူ ) ဦးသန့်၏မြေးဖြစ်သူ ဒေါက်တာသန်းမြင့်ဦးမှာ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရ၏ တော်တည့်သင့်မြတ်မူများနှင့် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားမူကို ဆန့်ကျင်ပါကြောင်း၊ တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ကြားနာသူဖြစ်သော မစ္စတာဂျင်ဝပ်မ်မှာ စစ်အစိုးရအား စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားမူကို လက်သင့်မခံနိုင်ကြောင်း ဆိုသောအချက်များထဲမှ အပြန်အလှန်မေးခွန်းများကိုသာ မေးမြန်းကြားနာသွားပါသည်။ယင်းနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ်မဟုတ်ကြောင်းစာတမ်းပါ တီရှပ် အင်္ကျီများကို ၀တ်ဆင်ပြီး ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ခန်းမထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကို တက်ရောက်ကြားနာစေခိုင်း ဆန္ဒပြခိုင်းစေပါသည်။ ယင်းကြားနာပွဲကို ကျွန်တော်တို့က နယူးယောက်မှ တက်ရောက်ကြားနာခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်တော်ပြောချင်သည်မှာ မစ္စတာဂျင်ဝပ်မ်၏ ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်သော်၎င်း၊ ဒီမိုကရေစီအရပ်သားအစိုးရအတွက်သော်၎င်း မည်သို့မျှ မျှော်လင့်ချက် ရရှိနိုင်သော ခရီးစဉ်မဟုတ်ကြောင်း သိစေနိုင်ပါသည်။
တချိန်ထဲမှာပင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံသားများကိုယ်စား ကျွန်တော်တို့မှ၎င်း၊ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုယ်စား၎င်း ၊ မစ္စတာဂျင်ဝပ်မ်အား စစ်အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား၎င်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အား၎င်း အသိပေးစကားများ ပြောကြားစေရမည့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွုပ်တို့၏နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် စဉ်းစားပြီး အကြောင်းကြားစာပေးပို့စေလိုပါသည်။
( ၁ ) ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် အခြားနိုင်ငံရောက် မြန်မာမာနိုင်ငံသားများ အသိအမှတ်မပြုကြောင်းနှင့် သပိတ်မှောက်ထားခြင်း။
( ၂ ) ပြည်တွင်းမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မီတီဝင်ပါတီများနှင့် ပြည်သူများက သပိတ်မှောက်ခြင်။
( ၃ ) ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုသာ လိုလားခြင်း။
( ၄ ) မတရားဖမ်းဆီးခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွပ်မြောက်ရေးကို လိုလားခြင်း။
( ၅ ) ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံခြင်း။
( ၆ ) မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားမူကို ဆက်လက်ထားရှိစေလိုဖြင်း။
( ၇ ) မြောက်ကိုးရီးယားနှင့် ပြုလုပ်နေသော ညူကလီးယားစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးကို ရပ်တန့်စေလိုခြင်း။
( ၈ ) ပြည်သူတရပ်လုံးမသုံးစွဲရသော သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ထွက်ပေါ်လာသည့် လျှပ်စစ်ရင်းအနှီးကို တရုပ်နိုင်ငံနှင့်၎င်း။ ကိုးရီးယားနိုင်ငံများနှင့် ပြုလုပ်နေခြင်းအားရုပ်သိမ်းစေလိုရေး စသည်တို့ပါရှိသော -------------။
အထက်ပါအကြောင်းအရာအချက်အလက်များအပြင် အခြားဖြည့်စွက်လိုသောအကြောင်းအရာများနှင့် အမြန်ဆုံး မစ္စတာဂျင်ဝပ်ထံသို့အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့သည်လည်း ၂၀၁၀ေ၇ွးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရေးအတွက် တောင်းဆိုမူမရှိကြောင်းနှင့် လွပ်လွပ်ပြီးတရားမျှတမှူလည်း ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကို ပီပြင်အောင် တင်ပြရလိုပါသည်။ သို့အတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလည်း မလိုတော့ကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောကြား ရေးသားကြရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ကော်မီတီအသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များက အမေရိကန်အစိုးရနှင့် မစ္စတာဂျင်ဝပ်မ်ထံသို့ လိပ်မူပြီး အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ရေးသားပေးပို့ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
နအဖ စစ်သံရုံးရှေ့ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဂလိုဘယ်အက်ရှင်နေ့ အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
reply by ko kyaw thu.pdf 0.136 MB
Reply by Ko Kyaw Thu
အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာမျိုးချစ်များခင်ဗျား.....ကျွန်တော်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရွှေဇီးကွက်ထံမှကိုမင်းနိုင်ထံသို့ July/16/2008 နေ့ စွဲ့ဖြင့်ဒေါ်လာ..3800 (42.75000) kyats. ကို လက်ခံ ရ ရှိ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပြီး ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည် ။
ကျွန်တော့်ထံသို့ဆက်သွယ်သည်ဟုဆိုရာတွင်မည်သည့်အချိန်..နေ့ ..ရက်..လ..နှစ်ကနည်း... ? ကျွန်တော်သိလိုပါသည်။ ကျွန်တော်သည်2008,2009 ခုနှစ်များတွင်INTERNET ကိုလုံးဝအသုံးမပြုပါ။ မေတ္တာရှေ့ထားကာဖြေရှင်းကြစေလိုပါသည်.............
Protest the SPDC!
JOIN US IN PROTEST OF THE ILLEGITIMATE BURMESE GOVERNMENT:
85 Range Road, Ottawa, ON
20 years ago today, Daw Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy were elected inalandslide by the people of Burma.The military dictatorship never allowed the democratically elected party to take power. They continue to run the country against the will of their people, and perpetrate some of the worst human rights abuses in the world.
Please join us in protest of this criminal regime. We call on them to step down from power, allow democratic elections to take place, and free Daw Aung San Suu Kyi from house arrest.
Burma deserves peace, power, and freedom!
‘Please use your liberty to help promote ours’ –Daw Aung San Suu Kyi
For more info contact Nisha Toomey 613 883 6409
ရှင်သန်နေဦးမည့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့် ဒီမိုက...
နအဖ စစ်သံရုံးရှေ့ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဂလိုဘယ်အက်...